လစာကဘာလဲ? လစာနှင့်လုပ်ခအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် | USAHello
လစာကဘာလဲ? ဒါဟာသင်အလုပ်လုပ်ဘို့အရတစ်ဦးငွေပေးချေမှုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပေးချေမှုတစ်လတစ် fixed ငွေပမာဏသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျလစာနှင့်လုပ်ခနှင့်အတူ paid ခံအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကိုအထဲက Find.
တချို့ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အတစ်နာရီခြားတစ်ခါသို့မဟုတ်အပတ်စဉ်မှုနှုန်းများ. အဆိုပါနှုန်းထားကိုသငျသညျတစ်နာရီများအတွက်ပေးဆောင်ရဒေါ်လာပမာဏကိုဆိုလိုပါတယ်, တစ်နေ့, သို့မဟုတ်တစ်ပါတ်.
သည်အခြားအလုပ်အကိုင်များနှစ်စဉ်သင်ပြောပြ (နှစ်ပတ်လည်) မှုနှုန်း, သို့မဟုတ်လစာ. သငျသညျတစျနှစျအတှကျအစုတခုငွေပမာဏဝင်ငွေ. အများအားဖြင့်, နှစ်စဉ်လစာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အသငျသညျအလုပ်မလုပ်သောနှစ်ပတ်အတွင်း၏အဆုံးသို့မဟုတ်လစဉ်လတိုင်းမှာသငျသညျပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျတစျနှစျအတှကျအနေဖို့လျှင်အလုပ်အကိုင်များနှစ်စဉ်လစာမှတက် add ပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးကလုပ်အားခနာရီအလိုက်ငွေပေးချေမှုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအသီးအသီးနာရီဘို့သင့်ကိုအလုပျထားငွေပမာဏကိုဝင်ငွေတစ်ခုအလုပ်ချိန်နာရီနှုန်းသည်နည်းလမ်းများ. ဤသည်ကိုမကြာခဏဟုခေါ်သည် “လုပ်ခလစာ။”
သငျသညျအသီးအသီးအလုပ်အကိုင်အပြီးပေးချေရဘယ်မှာအလုပ်အကိုင်များ၏အခြားမျိုးရှိပါတယ်. ဥပမာ, သငျသညျဝင်ငွေစေခြင်းငှါ, $50 သငျသညျရေးအသီးအသီးဆောင်းပါးများအတွက်.
သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ, သင်သည်သင်၏ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်. အလုပ်ရှင်သင်အလုပ်လကျခံဖို့ဆုံးဖြတ်မီပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်လောက်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်. သို့မဟုတ်, သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာမေးပါသို့မဟုတ်သင်သိသောလူတွေကိုမေးနိုငျ. သငျသညျအဘယျကြည့်ဖို့စစျဆေးနိုငျ ပျှမ်းမျှလစာ သင့်ရဲ့အလုပ်နှင့်မြို့သည်များအတွက်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခလိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာသင်ယူ တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်.
တခါတလေ, full-အချိန်သို့မဟုတ်အခြိနျပိုငျးအလုပ်အကိုင်အသငျသညျအခွားသောအကြိုးခံစားခှငျ့အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့လစာပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါလစာကအရေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်တခြားအမှုအရာကိုစဉ်းစားရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်, လွန်း. တခါတလေ, ကွဲပြားခြားနားသောအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါသညျလျှင်ပိုမိုမြင့်မားလစာနိမ့်လစာထက်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်.
အငြိမ်းစားယူမည့်အစီအစဉ်: သငျသညျအငြိမ်းစားများအတွက်ပိုက်ဆံကယ်တင်တဲ့အလုပ်တန်ခိုးအကူအညီနဲ့. သင်တစ်ဦးအငြိမ်းစားအကောင့်သို့သင့်ရဲ့လစာအချို့ကိုကယျတငျနိုငျ. အချို့ကုမ္ပဏီတွေကအထောက်အကူပြု, သို့မဟုတ် add, သင့်ရဲ့အငြိမ်းစားငွေစုအကောင့်.
အားလပ်ရက်များနှင့်အားလပ်ရက်လစာ: အချို့အလုပ်အကိုင်များ paid အားလပ်ရက်ပူဇော်, နေမကောင်းရက်ပေါင်း, နှင့်အားလပ်ရက်များ. ဤရွေ့ကားအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးကွဲပြား. သငျသညျ paid ရက်ပေါင်းချွတ်ဝင်ငွေလျှင်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်မေးပါ. သငျသညျအားလပ်ရက်အပေါ်အလုပ်မလုပ်လျှင်အခြားအအလုပ်အကိုင်များကိုပိုမိုတစ်နာရီကိုသင်ပေးဆောင်စေခြင်းငှါ,.
အလုပ်တစ်ခုများအတွက်ဝယ်လိုအားလည်းလစာထိခိုကျနိုငျ. ပွင့်လင်းအလုပ်အကိုင်များအများကြီးရှိပါတယ် အကယ်., နှင့်ကုမ္ပဏီများဒုက္ခတစ်စုံတစ်ဦးကိုငှားရမ်းပြီ, လစာပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါ. အလုပ်ရှာနေကြသူကလူအများကြီးရှိပါတယ် အကယ်., ထို့နောက်လစာနိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်.
သင့်တည်နေရာလစာပြောင်းလဲနိုင်သည်. တချို့ကမြို့ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအတွက်ပိုပြီးစျေးကြီးတယ်. သူများသည်မြို့ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်ပိုပြီးပေးဆောင်စေခြင်းငှါ. တချို့ကမြို့ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်း. သူများသည်မြို့ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များလျော့နည်းပေးဆောင်စေခြင်းငှါ. သငျသညျငှားသလောက်ပေးဆပ်ရန်မလိုပါသောကြောင့်, အစာ, နှင့်အခြားအမှုအရာ, နှစ်ခုပြည်နယ်များအကြားကွဲပြားခြားနားသောလစာသူတို့ကြည့်ရှုထက်ပိုတန်းတူဖြစ်စေခြင်းငှါ,.